इतिहासमा आज : अमेरिकीले उठाए बेलायतविरुद्ध बन्दुक - Kantipath.com
१९ अप्रिल १७७५, बिहान ५ बजे । ७ सय बेलायती सैनिकहरु अमेरिकी विद्रोहीले राखेका हतियार कब्जा गर्ने मिसनसहित लेक्सिङटनतर्फ लागे । यता, क्याप्टेन जोन पार्करअन्तर्गतका ७७ जना विद्रोहीहरु कमनग्रिनमा बेलायती सैनिक आउने प्रतिक्षामै थिए ।
बेलायती मेजर गोन पिटकाइरनले धेरैजसो विद्रोहीलाई तितर–वितर पार्न आदेश दिए । र, केही समय हच्किएपछि अमेरिकीहरु पनि भिड्न तयार भए । अचानक एक अज्ञातले गोली चलाए, अनि बिस्तारै कमनग्रिनमा धुवाँ देखियो ।
लेक्सिङटनको युद्ध सकिदाँसम्म आठ अमेरिकीहरु मारिएका थिए, १० जना घाइते भए । बेलायततर्फ एकजना सैनिकमात्रै घाइते भए । र, अमेरिकी क्रान्ति सुरु भइसकेको थियो ।
हतियार कब्जा गर्ने मनसाय:
यतिबेला अमेरिका बेलायतको उपनिवेश थियो । सन् १७७५ मा मासाच्युसेट्सबाट विद्रोह सुरु हुन थाल्यो । राष्ट्रवादीहरुले क्रान्तिकारी छायाँ सरकार गठन गरेर सैन्य विद्रोहका लागि मिलिसियाहरुलाई तालिम दिन थाले । यसको सुइँको पाएसँगै बेलायती सैनिकले विद्रोह दबाउनका लागि हतियार कब्जामा लिने योजना बनाए ।
त्यही योजनाअन्तर्गत १७७५ को वसन्तमा मासाच्युसेट्सका बेलायती गर्भनर जनरल थोमस गेजलाई अमेरिकी लडाकुहरुको पहुँचमा रहेका हतियार र गन पाउडरका सबै गोदाम कब्जा गर्न इङल्यान्डबाट निर्देशन आयो । कन्कर्डस्थित राष्ट्रवादीहरुले हतियार राखेको स्थलमा जानका लागि उनले १८ अप्रिलमा बेलायती सैनिकलाई आदेश दिए । लेक्सिङटनमा लुकेका राष्ट्रवादी नेताहरु स्यामुयल एडम्स र जोन हानककलाई कब्जामा लिन पनि आदेश थियो ।
यता, बोस्टन राष्ट्रवादी नामक विद्रोही समूहले बेलायतीबाट यस्तै सैन्य कारबाही हुनसक्ने पूर्वानुमान लगाएर त्यसको तयारी पनि गरेको थियो । बेलायतको योजना थाहा हुनसाथ आफ्ना सैनिकलाई जागा राख्न र एडम्स तथा हानककलाई यस खतराबारे जानकार दिन राष्ट्रवादी समूहले पाउल रिभेरी र विलिय डावेसलाई खटायो ।
जतिबेला, बेलायती सैनिक लेक्सिङटन पुगे, त्यतिबेला विद्रोहीहरुको एउटा समूह उनीहरुकै प्रतिक्षामा थियो । केही मिनेटभित्रै बेलायतीहरुले अमेरिकी राष्ट्रवादीलाई घेरा हाले, तर युद्ध सुरु भइसकेको थियो ।
मासाच्युसेट्का ग्रामिण इलाकाबाट हतियार निकाल्न राष्ट्रवादीहरुले अपिल गरे । जब बेलायती सैनिक ७ जबे कन्कर्ड पुगे, त्यतिबेला उनीहरुलाई सयौंको संख्यामा रहेका राष्ट्रवादीहरुले घेरामा हाले ।
अमेरिकी सैनिकहरुले जम्मा गरेका हतियारलगायतका सैन्य सामाग्रीहरु ध्वस्त गर्न उनीहरु सफल भए, तर यसक्रममा धेरैको ज्यान गयो ।
अमेरिकीहरुसँग प्रत्यक्ष मुडभेड नगरी बोस्टन फर्कनका लागि बेलायती सेनाका कमाण्डर लेफ्टिेन्ट कोलोनेल फ्रान्सिस स्मिथले आदेश दिए ।
बेलायतीहरु जब पुरानै बाटो फर्कदै थिए, तब राष्ट्रवादीहरुले उनीहरुलाई ढुंगा, रुखको हांगालगायतले प्रहार गरे । लेक्सिङटनमा क्याप्ेटन पार्करको मिलिसियाले बदला लिएरै छाड्यो, यहाँ ठूलो संख्यामा बेलायती सैनिक मारिए ।
बेलायतीहरु बोस्टन फर्कदाँसम्म ३ सय सैनिक या मारिएका, या घाइते वा बेपत्ता थिए । यता, अमेरिकी राष्ट्रवादीहरुतर्फ एक सयभन्दा कम मारिए । लेक्सिङटनको युद्ध अमेरिकी क्रान्तिको पहिलो युद्ध हो । जसले ७ वर्षपछि संयुक्त राज्य अमेरिका नामको नयाँ स्वतन्त्र देश जन्मायो ।
Previous Previous post: संसद अधिवेशन अन्त्य
Next Next post: हावाबाट पनि कोरोना सर्ने !
अमेरिकाले आणविक बम प्रहार गरेर हिरोसिमा शहर ध्वस्त पारेको ७२ वर्ष !
धर्मगुरु बलात्कारी ठहर भएपछि हिंस्रक प्रदर्शनमा ३६ को मृत्यु !
दार्जिलिङमा आन्दोलन स्थगित, बन्द फिर्ता
ट्रक दुर्घटनामा परी कम्तीमा १० जनाको मृत्यु, १२ जना घाइते
भ्रष्टाचारको समाचार लेखेको कारण भारतीय पत्रकारको हत्या